Deathy By Chocolate Cake စာရွက် + ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ - ကိတ်မုန့်
The ချောကလက်ကိတ်မုန့်ဖြင့်သေခြင်း ချောကလက်ချစ်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးသောကိတ်မုန့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ချောကလက်အတုံးကြီးများပါ ၀ င်သည့်အလွှာသုံးလွှာနှင့်စိုစွတ်သောကိတ်မုန့်ပါဝင်သည်။ ထိုအခါသူကအလင်းနှင့် fluffy နှင့်အတူ slathered လွယ်ကူသောချောကလက် buttercream နှင့်က ချောကလက် ganache ယို ။ တိုင်းကိုက်ထဲမှာ (ကရယူပါ? သင် haha ​​သေသောကြောင့်) ချောကလက်ကောင်းကင်ဘုံရဲ့!
ဤကိတ်မုန့်သည်၎င်း၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့်မှောင်မိုက်။ အရသာရှိသော Guinness ရဲရင့်သောဘီယာမှအရသာများစွာရရှိသည်။ ဒတ်ခ်ျ - လုပ်ငန်းများ၌ကိုကိုးအမှုန့် , espresso အမှုန့်, ​​ချောကလက်တုံးကြီးများနှင့် mayonnaise အနည်းငယ်! ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျမြည်းကြည့်ခဲ့ဖူးသောအံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးချောကလက်မုန့်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာငါနီးပါးဖြစ်ခြင်း၏ခါနီးအပေါ်ဖွင့်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါစိုစွတ်ပါတယ် အရမ်း စိုစွတ်သော။ အဲဒါကိစ္စလား? ဒါဟာလက်တွေ့ကျကျ fudge ရဲ့ချောကလက်အရသာဒါပြည့်ဝ၏။
ငါဒီကိတ်မုန့်ကိုပထမဆုံးလုပ်တဲ့အချိန်မှာ၊ ငါကဒီကိတ်မုန့်ကိုထပ်လုပ်တဲ့နည်းမရှိဘူး၊ ထိုအခါမူကား ... ငါကမြည်းစမ်း။ ငါသေသွားတယ် ငါအရသာရှိတဲ့ချောကလက်သေခြင်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုသေဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာဒုတိယအရသာအတွက် ၀ င်နိုင်ဖို့အတွက်ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်ပြန်ကျန်းမာလာခဲ့တယ်။
သင်ဤစာရွက်ကိုမစတင်မီ၊ သင်၌အရာအားလုံးရှိနေရန်သေချာစေရန်သင်ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုဖြတ်ကျော်ရန်သင့်အားအကြံပေးသည်။ သငျသညျလက်ပေါ်မှာရှိသည်မပြုစေခြင်းငှါအချို့သောပါဝင်ပစ္စည်းများရှိပါသည်။
Dark Beer - ဤအရာသည်သင်၏ကိတ်မုန့်ကိုအရက်ဖြစ်စေမည်မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါအရက်ထွက်ချက်ပြုတ်ပေမယ့်ဘီယာ၏ fizzy သဘောသဘာဝကြောင့်နက်ရှိုင်းသောမှောင်မိုက်အရသာချောကလက်အရသာတစ်တန်ထပ်ပြောသည်။ သင်သည်ဘီယာကိုအခန်းအပူချိန်ရှိသောကော်ဖီသို့မဟုတ်ရေဖြင့်အစားထိုးနိုင်သည်။ သင်ကော်ဖီသောက်ပါက espresso အမှုန့်ကိုချန်ထားပါ။ ငါဂင်းနစ်ဘီယာကိုပိုကြိုက်တာကြောင့်ချောကလက်လိုအရသာရှိပြီးသားပဲ။
Espresso အမှုန့် - တဖန်အက်စပရော့စ်အမှုန့်သည်သင်၏ကိတ်မုန့်ကိုကော်ဖီကဲ့သို့အရသာဖြစ်စေမည်မဟုတ်ဘဲ၎င်းသည်ချောကလက်အရသာကိုပိုမိုမြင့်မားစေသည်။ သင် espresso အမှုန့်မပါရှိပါကသင်ချက်ချင်းကော်ဖီရောနှောအသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်တစ်ခုခုကိုရှာမတွေ့ပါကသို့မဟုတ်၎င်းကိုမသုံးချင်ပါက၎င်းကိုထားခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်ကိုယုံကြည်ပါကကိတ်မုန့်သည်၎င်းမပါဘဲအကောင်းမဖြစ်နိူင်ပါ။
ဒတ်ခ်ျလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကိုးအမှုန့် - Hershey's လိုသဘာဝကိုကိုးအမှုန့်က alkaline ဖြစ်ပြီးကိတ်မုန့်မြင့်လာအောင်ဆိုဒါဆိုဒ်လိုတယ်။ သင်အလွန်အကျွံအသုံးပြုလျှင်ဆိုဒါမုန့်ဖုတ်သည်သင်၏ကိတ်မုန့်၌အရသာခံပြီးနောက်ထားနိုင်သည်။ ဒတ်ခ်ျလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကိုးအမှုန့်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိတ်မုန့်ကိုမြှင့်ရန်နှင့်အရသာအတွက်အနည်းငယ်မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါပြုလုပ်ရန်မုန့်ဖုတ်အမှုန့်ကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်၌ရှိသည်မှန်လျှင် Hershey ရဲ့မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါနှင့်အတူတစ်ဝက်မုန့်ဖုတ်မှုန့်ကိုအစားထိုးပါ။
Mayonnaise - မင်းရဲ့ချောကလက်ကိတ်မုန့်ကို mayo ဖြည့်တာကထူးဆန်းပုံရတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းစိုစွတ်မယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုယုံပါစေ Mayo ဟာသွားဖို့လမ်းပဲ။ Mayonnaise ကိုကြက်ဥနှင့်ဆီတို့မှပြုလုပ်သည်။ ဥနှင့်ရေနံ = အစိုဓာတ်! သင် mayonnaise ကိုမသုံးလိုလျှင်သို့မဟုတ်သင်၌မရှိလျှင်၎င်းကိုဆီနှင့်အစားထိုးနိုင်သော်လည်းအလေးချိန်အားဖြင့် Mayo ထက်ဝက်လောက်သာသုံးနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်သင်၏ကိတ်မုန့်သည်အလွန်များလွန်းသည်။
CHOCOLATE ကိတ်မုန့်အားဖြင့်သေခြင်း STEP-BY-STEP
သင်စတင်မီ - သင်၏ထောပတ်၊ ဂင်းနစ်စ်၊ ဥနှင့် mayonnaise တို့ကိုအခန်းအပူချိန်သို့ယူဆောင်လာပြီးကျန်ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုပြင်ဆင်ပါ။ ငါ့ဘလော့ဂ်ကိုစစ်ဆေးပါ အခန်းအပူချိန်ပါဝင်ပစ္စည်း hacks ပိုမိုသိရှိလိုပါကများအတွက်။
အကောင်းဆုံးရလဒ်များအတွက် အစားအစာစကေးကိုသုံးပါ သင့်ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများအလေးချိန်ရန်။ ဤစာရွက်ကိုခွက်များသို့ပြောင်းလဲခြင်းသည်ပျက်ကွက်စေနိုင်သည်။ ငါ့ blog post ပေါ်မှာဖတ်ပါ စကေးကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ ပိုမိုသိရှိလိုပါကများအတွက်။
ထောက်ခံချက် - အကယ်၍ သင်သည်ယူကေကိုရှာပါကပရိုတင်းပမာဏ ၉% သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသောပျော့သောကိတ်မုန့်နှင့်မုန့်ညက်နှင့်ဂျုံမှုန့်ကိုရှာပါ။
အဆင့် 1 - သင့်မီးဖိုကို335º F / 168º C. အပူပေးပြီး C. သင်၏ကိတ်မုန့်များကိုပြင်ဆင်ပါ ကိတ်မုန့် သို့မဟုတ်အခြား ဦး စားပေးဒယ်အိုးဖြန့်ချိ။ ငါက 8″ ပတ်ပတ်လည်ကိတ်မုန့်အိုးသုံးသုံးပေမယ့်သင်သည်ငါ့အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်မည်သည့်အရွယ်အစားဒယ်အိုးမှဤစာရွက်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ် ကိတ်မုန့် Battery ကိုဂဏန်းတွက်စက် ဤဘလော့ဂ်ပို့စ်၏အောက်ဆုံးရှိစာရွက်ကဒ်ပြားပေါ်တွင်ထိုင်ပါ။ optional: ချောကလက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှကပ်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်ဒယ်အိုး၏အောက်ခြေကိုသားရေစာစက္ကူဖြင့်တန်းစီပါ။
အဆင့် ၂ - ကြီးမားသောခွက်ဖလားတွင်ဘီယာ၊ espresso အမှုန့်နှင့် vanilla တို့ကိုပေါင်းစပ်ပါ။ အားလုံးအတူတူ Whisk ။
အဆင့်3- ပန်းကန်လုံးကြီးတစ်လုံးထဲတွင်မုန့်ညက်၊ ကိုကိုးမှုန့်၊ ဆား၊
အဆင့်4- နူးညံ့ပျော့ပျောင်းသောထောပတ်ကိုရပ်တန့်သောရောနှောထားသောအိုးတွင်လှော်ခတ်ထားသည့်နေရာတွင်ထားပါ။ ချောမွေ့ပြီးတောက်ပသည်အထိအလတ်စားအပေါ် Cream ။ စက္ကန့် ၃၀ ခန့်။
အဆင့်5- အနိမ့်ပေါ်တွင်ရောနှောနှင့်အတူ, တဖြည်းဖြည်းသကြား၌ဖြန်း။ အရောအနှောသည်အဖြူနှင့်နီးသည်အထိအလယ်အလတ်အမြင့်တွင်ရောစပ်ပါ။ ၃-၅ မိနစ်ခန့်။
အဆင့်6- မြန်နှုန်းကိုအနိမ့်သို့ပြန်လျှော့ချပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာသင်၏ဥများကိုတစ်လုံးထည့်ပါ။ သင့်ရဲ့ Battery ကိုချိုးဖဲ့ခြင်းမှရှောင်ရှားရန်ကြက်ဥကိုနောက်ဥတစ်လုံးထဲမထည့်ခင်အပြည့်အဝထည့်သွင်းပါစေ။
အဆင့် ၈ - ထို့နောက်သင်၏အခန်းအပူချိန် mayonnaise ထဲသို့ပေါင်းထည့်ပြီးသည်အထိရောမွှေပါ။
Pro-tip - အကယ်၍ သင်၏ဘက်ထရီပြတ်တောက်သွားလျှင် (ထောင့်ပုံအရကြည့်လျှင်) သင်၏ကိတ်မုန့်သည်ကောင်းမွန်စွာကြီးထွားမည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏ကိတ်မုန့်အောက်ခြေတွင်ချက်ပြုတ်ထားသော Gummy အလွှာတစ်ခုကိုသင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဥ, Mayo, ဘီယာနှင့်ထောပတ်အားလုံးအခန်းအပူချိန်သို့မဟုတ်ပင်နွေး tad ဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်အလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကစနစ်တကျအတူတကွရောမွှေပါ။
အဆင့်9- အရောအနှောနည်းသောရောနှောခြင်းဖြင့်သင်၏ခြောက်သွေ့သောပါဝင်ပစ္စည်းများထဲမှ 1/3 ကိုထည့်ပြီးပေါင်းစပ်သည်အထိရောနှောပါ။ သင့်ရဲ့အရည်ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ 1/3 ထည့်ပါ။ ပန်းကန်လုံးကိုခြစ်ပါ။ အရာအားလုံးကိုပေါင်းစပ်သည်အထိလုပ်ငန်းစဉ်ကိုနှစ်ကြိမ်ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ပါ။
အဆင့် 10 - အဆုံးတွင်သင်၏ချောကလက်ချစ်ပ်များသို့မဟုတ်ကုန်တယ်ချောကလက်များကိုရောမွှေပါ။ ဤချောကလက်တုံးများသည်ချောကလက်ကိတ်မုန့်ကြောင့်သေခြင်းတရားကိုထိပ်ဆုံးမှကျော်ဖြတ်ပြီး၎င်းကိုအလွန်အမင်းချောကလက် -Y ဖြစ်စေသည် (စကားလုံးတစ်လုံးလား?)
Pro-tip - ထုကုန်တယ်ချောကလက်သို့မဟုတ်သေးငယ်သောချောကလက်ချစ်ပ်များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အကောင်းဆုံး၊ ပုံမှန်ချောကလက်ချစ်ပ်များသည်အလွန်ကြီးမားပြီးဒယ်အိုးအောက်ခြေသို့ကျသွားလိမ့်မည်။
အဆင့် 11 - သင်၏ကိတ်မုန့် Battery ကိုသင်၏ပြင်ဆင်ထားသောအိုးများထဲသို့ခွဲပါ။ ကိတ်မုန့် ) ။ ငါက 8″ x2″ ကိတ်မုန့်သုံးလုံးကိုသုံးပြီးငါဒယ်အိုးတစ်လုံးစီတွင်ဘက်ထရီတူညီမှုရှိကြောင်းသေချာစေရန်အတိုင်းအတာတစ်ခုကို သုံး၍ ကျွန်ုပ်သည်အလွှာများကိုပင်ရရှိခဲ့သည်။ လုံးဝ optional ကို haha!
အဆင့် 12 - 335º F / 168ºCတွင်မုန့်ဖုတ်ခြင်းကို ၄၀-၄၅ မိနစ် (သင်အသုံးပြုသောဒယ်အိုးအရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ မုန့်ဖုတ်ချိန်သည်ကွဲပြားလိမ့်မည်) သွားသွားတစ်ချောင်းသည်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စွာထွက်လာသည့်တိုင်အောင်အနည်းငယ်ကပ်လျက်တည်ရှိသည်။ မုန့်ဖုတ်မလွန်ပါစေနှင့်။
အဆင့် 13 - သင်၏ကိတ်မုန့်များကို ၁၀-၁၅ မိနစ်ခန့်ကြာအောင်အေးအောင်ထားပါ။ အိုးများကိုဝါယာကြိုးတစ်ခုပေါ်တင်။ အပြည့်အဝအေးပါ။
Pro-tip - ဒယ်အိုးထဲကကိတ်မုန့်တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူဖယ်ရှားနိုင်ဖို့၊ အပူအအေးခံအကန့်ရဲ့အပေါ်ဘက်မှာအအေးခံစင်ကိုထားပါ။ ကိတ်မုန့်ပြားနှင့်အအေးခံကိုသင်၏လက်များဖြင့်အတူတကွကိုင်ထားပါ၊ အပေါ်ဘက်ရှိတစ်ခုနှင့်အောက်ခြေရှိတစ်လုံး။ ကိတ်မုန့်ဒယ်အိုးနှင့်အအေးခံစင်ပေါ်သို့လှန်လိုက်ပါ။ နှစ်ခုလုံးကိုချထားပါ၊ ထို့ကြောင့်ကိတ်မုန့်သည်အအေးခံစင်၏ထိပ်တွင်ရှိနေသည်။ ဒယ်အိုးကိုချွတ်လိုက်ပါ။
အဆင့် 13 - ပြီးတာနဲ့အအေးခံပြီးနောက်ပလပ်စတစ်ထုပ်ပြီးညင်သာစွာထုပ်ပြီးကိတ်မုန့်များကိုကိုင်တွယ်ရန်လုံလောက်သည်အထိအေးပါ။ အကယ်၍ သင်လျင်မြန်စွာအအေးခံရန်လိုပါကရေခဲသေတ္တာထဲ၌တစ်နာရီခန့်အေးခဲနိုင်သည်။
ငါသေခြင်းနှင့်အတူချောကလက်ကိတ်မုန့်ဖြင့်အစပြုခဲ့သောနှင်းခဲကိုအသစ်ပြုပြင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကိတ်မုန့်သည်အဆင့်များစွာရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့်နှင်းခဲကိုအဘယ်ကြောင့်ရှုပ်ထွေးစေသနည်း။ မူလကကျွန်ုပ်တွင်ချောကလက်ဒိန်ခဲအေးခဲနေခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်အတွက်ပြုလုပ်သောအခါတိုင်း (မကြာခဏဖြစ်လေ့ရှိသည်) ကျွန်ုပ်သည်ချောကလက်ကိုလွယ်ကူသော buttercream နှင့်ချောကလက် ganache ယိုယွင်းခြင်းကိုပြုလုပ်သည်။
သငျသညျချောကလက်မုန့်ဒိန်ခဲအေးခဲစေလိုလျှင်, သင်တတ်နိုင်သမျှ, စိတ်မပူပါနဲ့ ရုံ 1/4 ခွက်ဖလားကိုဆန်ခါအမှုန့်သကြားသို့မဟုတ် 1/4 ချောကလက် ganache (သင်သင်၏ယိုကနေကျန်ကြွင်းကိုသုံးနိုင်သည်) add ငါ့ပုံမှန်အစည်းအဝေးသို့ထည့်ပါ စာရွက်နှင်းခဲမုန့် ။
အဆင့် 1 - Pasteurized egg whites များနှင့်သကြားမှုန့်များကိုသင်၏ stand mixer ၏အိုးထဲသို့ထည့်ပါ။ ပေါင်းစပ်ဖို့စက္ကန့် 30 အဘို့အနိမ့်အပေါ်ရောမွှေပါ။
အဆင့် ၂ - သင့်ဆန်ခါစစ်ထားသောကိုကိုးအမှုန့်၊ ထိုအခါအမြန်နှုန်းအထိအရှိန်တိုး။
အဆင့်3- သင်၏ပျော့ပျောင်းသောထောပတ်ထဲသို့သေးငယ်သောအတုံးများဖြင့်စတင်ထည့်ပါ။ သင်ကအားလုံးကိုထည့်ပြီးသည်အထိကြီးမားသော marshmallow ၏အရွယ်အစားအကြောင်း။
အဆင့်4- ချောကလက်ရေခဲမုန့်ကဲ့သို့အရသာမပြည့်မှီတိုင်အောင်သင်၏ buttercream ကိုကြာမြင့်စွာထားပါ။ သင်၏ရောနှောမှု၏စွမ်းအားပေါ် မူတည်၍ သို့မဟုတ်သင်၏ထောပတ်အေးလျှင် မူတည်၍ ၁၀ မိနစ်မှ ၁၅ မိနစ်ခန့်ကြာနိုင်ပါသည်။ ထောပတ်လိုအရသာရှိနေတုန်းပဲ။
အကြံပြုချက် - အကယ်၍ သင်၏ထောပတ်သည်မရောနှောပါကအလွန်အေးလွန်းနိုင်သည်။ သင်၏ buttercream အရောအနှော ၁ ခွက်ကိုထုတ်ပြီး ၄ င်း၏ JUST အရည်ပျော်သည်အထိ ၁၅-၃၀ စက္ကန့်ကြာမျှမိုက်ကရိုဝေ့ဖ်ပြုလုပ်ပါ။ မပူဘူး အရောအနှောကိုသင်၏ရောစပ်နေသော buttercream ထဲသို့ပြန်ထည့်ပါ။
GANACHE အဆင့် BY ဖြတ်
အဆင့် ၁ - သင်၏ချောကလက်ကိုနွေးစေရန်စက္ကန့် ၃၀ ကြာမိုက်ကရိုဝေ့ဖ်ပါ
အဆင့် ၂ - လေးလံသောမုန့်ကိုမျှတည်ထားသည့်တိုင်အောင်အပူပေးပါ။ သင်၏မုန့်ကိုမဆူပွက်ပါနှင့်။ ဤနေရာတွင်ပြီးပြည့်စုံသော ganache ယိုခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
အဆင့် ၃ - သင်၏ ganache ကို90ºFအထိမအေးစေပါနှင့်။ ငါကိတ်မုန့်ကိုမခဲမီ၊ ငါ crumb အင်္ကျီနှင့် buttercream ၏နောက်ဆုံးကုတ်အင်္ကျီပြုမိအချိန်တွင်, ယိုသုံးစွဲဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ။
သင်၏ပထမဆုံးကိတ်မုန့်ကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်မည်သို့လုပ်ရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက်ကျွန်ုပ်၏စစ်ဆေးမှုကိုစစ်ဆေးပါ သင်၏ပထမဆုံးကိတ်မုန့်သင်ခန်းစာမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း ။
အဆင့် 1 - သင်၏ကိတ်မုန့်များအအေးခံပြီးနောက်ရေခဲသေတ္တာထဲ၌သူတို့ကိုင်တွယ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူပြီး၎င်းတို့ကိုအဆင့်မြှင့်ရန်အမိုးခုံးများကိုဓားဖြင့်ဖြတ်တောက်ပါ။
အဆင့် ၂ - သင်၏ပထမဆုံးကိတ်မုန့်ကိုသင်၏ကိတ်မုန့်ဘုတ်ပေါ်တွင် (သို့) သင်၏ကိတ်မုန့်ပြားပေါ်တွင်တင်ပါ။ buttercream နှင့်ဖြည့်ပါ။ ငါနှင်းခဲ၏ 1/4 for အဘို့အသွားချင်။ နှင်းခဲအဆင့်ကို offset spatula ဖြင့်ကြိုးစားပြီးသိမ်းထားပါ။ နောက် layer တစ်ခုနှင့်ထပ်လုပ်ပါ။
အဆင့်3- ကိတ်မုန့်တစ်ခုလုံးကို buttercream ပါးလွှာသောဖုံးအုပ်ထားပါ။ ဤသည်ကိုအင်္ကျီဟုခေါ်သည်။ ထိုအခါ buttercream ထားရန် 20-30 မိနစ်ကိတ်မုန့်အေးခဲ။
အဆင့်4- buttercream ၏နောက်ဆုံးအလွှာကိုလိမ်းပြီးချောချောမွေ့မွေ့ခြစ်ထားသောသို့မဟုတ်သင်၏ offat spatula ဖြင့်ချောမွေ့အောင်ပြုလုပ်ပါ။ သင့်ရဲ့ offset spatula နှင့်အတူထိပ်ချွတ် level ။
အဆင့်5- ကိတ်မုန့်မချမီ 15 မိနစ်ကိတ်မုန့်ကိုရေခဲသေတ္တာထဲသို့ပြန်ပို့ပါ။
အဆင့်6- သင်၏အအေးခံ ganache ကိုပိုက်အိတ်ထဲထည့်ပြီးအစွန်အဖျားမှဖြတ်ပစ်ပါ။ အပေါက်ကြီးလွန်းအောင်မလုပ်ပါနဲ့ ၎င်းသည်ဝေးလွန်းစွာမယိုအောင်သေချာစေရန်အအေးခံကိတ်မုန့်ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုယိုပါ။ ထိုသို့ဖြစ်ခဲ့လျှင်၎င်းသည်အလွန်ပူလွန်း။ မယိုမီအအေးပေးရန်လိုအပ်သည်။
အဆင့် ၇ - ငါကျန်ရှိသော buttercream နှင့် ganache ကို သုံး၍ ကိတ်မုန့်၏ထိပ်တွင်အခြားပိုက်လိုင်းအိတ်တစ်ခုနှင့် 1M ပိုက်အစွန်အဖျားလေးတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ရုံအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ကိတ်မုန့်ကိုကြည့်! သငျသညျချောကလက်အားဖြင့်သေခြင်းတရားကိုတွေ့ကြုံခံစားသွားလျှင်, ဤထိုသို့ပြုမှနည်းလမ်းပါ! အဆိုပါယိုနှင့် swirl စူပါရိုးရှင်းသောသော်လည်း, သူတို့သည်အမှန်တကယ်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ကြည့်ရှုပါ!
Pro-Tip - အေးခဲတဲ့ကိတ်မုန့်တွေကိုရေခဲသေတ္တာထဲမှာအမြဲသိမ်းထားတယ်။ နှင်းခဲသည်အတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးကိတ်မုန့်ကိုလတ်ဆတ်စေသော်လည်းအအေးကိတ်မုန့်ကိုဘယ်တော့မျှအစေခံမည်မဟုတ်ပါ။ ထောပတ်အအေးဖြစ်သောကြောင့်ကိတ်မုန့်အလွန်ခြောက်သွေ့သည်။ မင်းရဲ့ကိတ်မုန့်တွေကိုမင်းမ ၀ င်ခင်နာရီအနည်းငယ်အကြာမှာရေခဲသေတ္တာထဲကနေအမြဲထုတ်ပါ။ အရမ်းအေးမယ်ဆိုရင်ငါက ၁၀ စက္ကန့်လောက်ကျွန်တော့်ရဲ့ကိတ်မုန့်ကိုအဏု microwave လောက်တောင်လုပ်ဖူးတယ်။
ဒီစာရွက်အတွက်ဟုတ်ကဲ့။ မုန့်ညက်ကိတ်မုန့်သည်ပရိုတင်းဓာတ်နည်းသောဂျုံမှုန့်ဖြစ်ပြီးပြောင်းပြန် creaming အဆင့်တွင် gluten ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းသည်။ သင်သည်ဂျုံမှုန့် / ပြောင်းဖူးမှုန့်လှည့်ကွက်ကိုမပြုလုပ်နိုင်ပါ။ သို့မဟုတ်ကိတ်မုန့်အလွန်အကျွံရောစပ်ပြီးပြောင်းဖူးကဲ့သို့အရသာရှိလိမ့်မည်။
ငါသည်သင်တို့၏ကိတ်မုန့် Mayo ကဲ့သို့မြည်းစမ်းမည်မဟုတ်ကတိ! ၎င်းသည်သင်၏ fork texture အတွက် yummy stick အတွက်ချောကလက်ကိတ်မုန့်ထဲသို့အစိုဓာတ်များစွာထည့်သွင်းပေးသည်။ သငျသညျလွင်ပြင်ဂရိဒိန်ချဉ်သို့မဟုတ်ချဉ်သောမုန့်ကိုသုံးနိုင်သည်, ဒါပေမယ့်အရသာအတူတူဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
Espresso အမှုန့်ကိုများသောအားဖြင့်ချောကလက်အရသာကိုဖော်ထုတ်ရန်မုန့်ဖုတ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းကိုကော်ဖီစေ့များနှင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအမှုန့်များအဖြစ်ပြုလုပ်ထားပြီးအခြောက်ခံသည်။ ၎င်းသည်လက်ငင်းကော်ဖီထက် ပို၍ အာရုံစိုက်သော်လည်းသင်၏ကိတ်မုန့်ကိုကော်ဖီအရသာထည့်သွင်းမည်မဟုတ်ပါ။
သင်လုပ်နိုင်သည် မင်းကိုယ်ပိုင်လုပ်ပါ espresso အမှုန့်, ​​ဒါမှမဟုတ်မှောင်မိုက်ကင်လက်ငင်းကော်ဖီဖြင့်အစားထိုး။ ဒါဟာတူညီတဲ့ကြွယ်ဝသောလှော်အရသာဆောင်ခဲ့မည်မဟုတ်, သင်မူကားနေလျှင်သင်ကလှည့်ကွက်ပြုလိမ့်မည်။
ပုံမှန် COCOA မှုန့် vs ပုံမှန်
ဒတ်ခ်ျ - လုပ်ငန်းများ၌ကိုကိုးအမှုန့် နှင့်သဘာဝကိုကိုးအမှုန့်အတူတူမရှိကြပေ။ ဒတ်ခ်ျထုတ်လုပ်မှုသည်၎င်း၏အက်ဆစ်ဓာတ်ကိုပျက်ပြယ်စေသည့် Alkali ဖြင့်ကုသသည်။ ၎င်းသည်ပိုမိုအားကောင်းသည့်အရသာနှင့်အနက်ရောင်နီးပါးအနက်ရောင်အရောင်ကိုရရှိစေသည်။ Dutched ကိုသင်မတွေ့ပါကသင်ပုံမှန်ကိုကိုးအမှုန့်အစားအစားထိုးနိုင်သည်။
ချောကလက်ကိတ်မုန့်ဖြင့်သေခြင်းသည်ချောကလက်ချစ်သူများအိပ်မက်ဖြစ်သည် ဒီကိတ်မုန့်ဟာ Guinness ဘီယာ၊ mayonnaise၊ espresso အမှုန့်နှင့်ချောကလက်သေးသေးလေးများမှချောကလက်အရသာပြင်းစေသည်။ လွယ်လွယ်ကူကူချောကလက် buttercream နှင့်ကြွယ်ဝသော ganache ယိုနှင့်အတူသငျသညျအသေဖြစ်နိုင်သည်ပေမယ့်သင်ပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မယ်! ဒီချောကလက်ကိတ်ကနှလုံးရောဂါမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ပြင်ဆင်ချိန် -နှစ်ဆယ် မိနစ် ချက်ပြုတ်ချိန် -၄၀ မိနစ် စုစုပေါင်းအချိန်:၁ နာရီ ကယ်လိုရီ1881kcal
▢၁၄ oz (397 ဆ) ရဲရင့်သောဘီယာ Guinness (အခန်းအပူချိန်) ကဲ့သို့
▢1 1/2 Tbsp (1 1/2 Tbsp) Espresso အမှုန့်
▢နှစ် Tsp (နှစ် Tsp) ရီးယဲလ် vanilla
▢၁၄ oz (397 ဆ) မုန့်ကိတ်မုန့်
▢၁ Tsp (၁ Tsp) မုန့်ဖုတ်ပေါင်ဒါ
▢နှစ် Tsp (နှစ် Tsp) မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ
▢1 1/2 Tsp (1 1/2 Tsp) ဆားငန်
▢၆ oz (၁၇၀ ဆ) စွန့်ပစ်ကိုကိုးမှုန့်
▢၁၀ oz (၂၈၄ ဆ) မလုံလောက်ဘူးနို့ အခန်းအပူချိန်
▢၁၆ oz (454 ဆ) သကြားဓာတ်
▢၆ oz (၁၇၀ ဆ) Mayonnaise အခန်းအပူချိန်
▢၆ oz (၁၇၀ ဆ) အသေးစားချောကလက်ချစ်ပ်
▢၁၆ အောင်စ (454 ဆ) unsalted ထောပတ် အခန်းအပူချိန်ပျော့
▢နှစ် အောင်စ (57 ဆ) ကိုကိုးအမှုန့် ဆန်ခါချခဲ့သည်
▢၁ ဇွန်း vanilla ထုတ်ယူ
▢၈ oz (၂၂၇ ဆ) Semi-Sweet ချောကလက်
▢၄ oz (၁၁၃ ဆ) ပြင်းထန်သောနှင်တံ Cream
မှတ်ချက်။ အထက်ဖော်ပြပါအခန်းအပူချိန်ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးသည်အခန်းအပူချိန်မဟုတ်ဘဲအအေးမဖြစ်ဖို့အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့်ပါဝင်ပစ္စည်းများမှန်ကန်စွာရောနှောပါဝင်သည်။
၃၃၅ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှ ၁၆၈ to စင်တီမီတာကိုအပူပေးပြီးအပူပေးသည့်မီးဖိုကိုကိတ်မုန့်ဖြင့်ပြုလုပ်ပါ။ ငါ 8'x2 'ပတ်ပတ်လည်ကိတ်မုန့်အိုးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒီစာရွက်ကဒ်ပေါ်က cake batter calculator ကိုသုံးပြီးသင့်အရွယ်အစားကိုကိတ်မုန့်နဲ့ညှိပါ။ optional: ချောကလက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှကပ်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်ဒယ်အိုး၏အောက်ခြေကိုသားရေစာစက္ကူဖြင့်တန်းစီပါ။
ကြီးမားသောတိုင်းခွက်တွင်ဘီယာ၊ espresso အမှုန့်နှင့် vanilla တို့ကိုပေါင်းစပ်ပါ။ အတူတူ Whisk နှင့်ဘေးဖယ်ထား။
ပန်းကန်လုံးကြီးတစ်ခုတွင်ဂျုံမှုန့်၊ ကိုကိုးအမှုန့်၊ ဆား၊ မုန့်ဖုတ်နှင့်မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါများကိုအတူတကွစစ်။ ဘေးဖယ်ထားပါ။
နူးညံ့ပျော့ပျောင်းသောထောပတ်ကိုဒယ်အိုးနှင့်အတူရပ်နားထားသောရောနှောထားသောအိုး၌ထားပါ။ ချောမွေ့ပြီးတောက်ပသည်အထိ Cream ။ အနိမ့်အပေါ်ရောနှောနှင့်အတူ, တဖြည်းဖြည်းသကြား၌ဖြန်း။ အရောအနှော fluffy နီးပါးအဖြူသည်အထိအလတ်စားမြင့်မားသောအပေါ်ရောမွှေပါ။ ၃-၅ မိနစ်ခန့်။
မြန်နှုန်းကိုပြန်နိမ့်ကျအောင်လျှော့ချပါ။ သင်၏ (ROOM TEMP) ဥများကိုတစ်ကြိမ်ထည့်ပါ။ သင့်ရဲ့ Battery ကိုချိုးဖဲ့ခြင်းမှရှောင်ရှားရန်ကြက်ဥကိုနောက်ဥတစ်လုံးထဲမထည့်ခင်အပြည့်အဝထည့်သွင်းပါစေ။ သင်၏ Mayo တွင်ထည့်ပြီးပေါင်းစပ်သည်အထိရောမွှေပါ။
အရောအနှောနည်းသောရောနှောခြင်းဖြင့်သင်၏ခြောက်သွေ့သောပါဝင်ပစ္စည်းများသုံးပုံတစ်ပုံကိုပေါင်းထည့်ပြီးပေါင်းသင်းသည်အထိရောနှောပါ။ သင့်ရဲ့အရည်ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ 1/3 ထည့်ပါ။ အရာအားလုံးကိုပေါင်းစပ်သည်အထိလုပ်ငန်းစဉ်ကိုနှစ်ကြိမ်ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ပါ။
အသေးစားချောကလက်ချစ်ပ်များထဲသို့ခေါက်။ ကိတ်မုန့်ကိုသင်၏ကိတ်မုန့်အဖြစ်ခွဲပါ။ သွားသွားတစ်ချောင်းသည်သန့်ရှင်းစွာထွက်လာသည့်တိုင်အောင်အနည်းငယ်စေးကပ်သောမုန့်များဖြင့် ၄၀ မှ ၄၅ မိနစ်ခန့်ဖုတ်ပါ။ မဖိတ်ပါနဲ့
သင်၏ကိတ်မုန့်များကိုအအေးခံ။ ၁၀-၁၅ မိနစ်ခန့်အေးအောင်ထိန်သိမ်းသည့်အထဲမထည့်ပါနှင့်။ အပြည့်အဝအအေးခံပါစေ၊ ထို့နောက်ပလတ်စတစ်အိတ်များနှင့်ညင်ညင်သာသာထုပ်ပိုးပြီးကိတ်မုန့်များကိုကိုင်တွယ်ရန်လုံလောက်သည်အထိအေးပါ။ အကယ်၍ သင်လျင်မြန်စွာအအေးခံရန်လိုအပ်ပါက၎င်းသည်ရေခဲသေတ္တာထဲ၌အေးခဲသွားနိုင်သည်။
သင်၏အရောအနှောရောထားသောပုလင်းထဲတွင် Pasteurized ကြက်ဥအဖြူ၊ အမှုန့်သကြားနှင့်ကိုကိုးအမှုန့်တို့ကိုထည့်ပါ။
, အ whisk ပူးတွဲပါနိမ့်အပေါ်ပါဝင်ပစ္စည်းများပေါင်းစပ်ပြီးတော့5မိနစ်အမြင့်ဆုံးအပေါ်ရိုက်။
သင်၏ပျော့ပျောင်းသောထောပတ်များကိုအတုံးများထဲသို့ထည့်ပါ။ vanilla နှင့်ဆားထည့်ပါ။ အလင်းနှင့် fluffy သည်အထိမြင့်မားသောအပေါ် whisk ။
နွေးထွေးစေရန်သင်၏ချောကလက်ကိုစက္ကန့် ၃၀ ကြာမိုက်ကရိုဝေ့ဖ်ပါ
မီးဖိုပေါ်ရှိအပူချိန်ကိုမီးမပြင်းမှီတိုင်အောင်အပူပေးသည်။ မပြုတ်ပါနဲ့ အအေးခံ။
ချောကလက်ကိုလောင်းကာ ၅ မိနစ်ခန့်ထိုင်ပါ။ ချောမွေ့သည်အထိ whisk ။ အကယ်၍ သင့်တွင်ဖုများရှိပါကပန်းကန်လုံးကိုစက္ကန့် ၃၀ အတွင်းမိုက်ခရိုဝေ့ဖ်ထဲသို့ထည့်ပြီးတိုးပါ။ ganache ဟာ90ºံလောက်အေးအောင်ထားပါ။ ganache ကိုပိုက်အိတ်ထဲထည့်ပြီးအေးခဲနေသောအေးခဲနေသောကိတ်မုန့်ထိပ်တွင်မိုးရေကျပါ။
1. သင့်ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုယူလာပါ အခန်းအပူချိန် သင့်ရဲ့ဘက်ထရီပြတ်တောက်မသွားအောင်သို့မဟုတ်နွေးထွေးမှုအနည်းငယ် (ဥများ၊ ဘီယာ၊ Mayo၊ ထောပတ်စသည်တို့) ပင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ 2. မှစကေးကိုသုံးပါ သင့်ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများအလေးချိန် (အရည်များအပါအ ၀ င်) မဟုတ်ပါကညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိပါ (ဇွန်း၊ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း၊ အဖြစ်တော့စသည်) ။ မက်ထရစ်တိုင်းတာမှုစာရွက်ကဒ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အရွယ်အစားပါဝင်ပစ္စည်းများသည်ခွက်များအသုံးပြုခြင်းထက်ပိုမိုတိကျပြီးသင်၏စာရွက်၏အောင်မြင်မှုကိုသေချာစေသည်။ ၃။ Mise en Place လေ့ကျင့်ပါ။ သင်၏ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုကြိုတင်တိုင်းတာ။ တစ်ခုခုမတော်တဆထွက်ခွာရန်အခွင့်အလမ်းများကိုလျှော့ချရန်သင်မရောစပ်မီကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ။ 4. နှင်းခဲများမဖြည့်ခင်သင်၏ကိတ်မုန့်များကိုအေးအောင်လုပ်ပါ။ နှင်းခဲနှင့်အအေးခံထားသောကိတ်မုန့်ကိုသင်နှစ်သက်လျှင်ဖုံးအုပ်နိုင်သည်။ ဤသည်ကိတ်မုန့် stacking အဘို့လည်းကြီးလှ၏။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလွယ်ကူစေရန်မပို့မီကျွန်ုပ်၏ကိတ်မုန့်များကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင်အမြဲထားလေ့ရှိသည်။ ပိုမိုလေ့လာပါ သင်၏ပထမဆုံးကိတ်မုန့်ကိုအလှဆင်သည်။ ၅။ အကယ်၍ စာရွက်တွင်ကိတ်မုန့်ကဲ့သို့သောသီးခြားပါဝင်သောအရာများကိုတောင်းဆိုပါကအဆင်သင့်ဖြစ်သောဂျုံမှုန့်နှင့်ပြောင်းဖူးမှုန့်ဖြင့်အစားထိုးရန်အကြံမပြုထားပါက၊ ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုအစားထိုးဒီစာရွက်ပျက်ကွက်စေနိုင်သည်။ အားလုံးရည်ရွယ်သောဂျုံမှုန့်မမြင့်တက်အေးဂျင့်များနှင့်အတူလွင်ပြင်မုန့်ညက်သည်။ ၎င်းတွင်ပရိုတင်းပမာဏ ၁၀% မှ ၁၂% အထိရှိသည်။ ကိတ်မုန့်သည်နူးညံ့သောအနိမ့်ပရိုတိန်းဂျုံမှုန့်ဖြစ်ပြီး ၉% သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသည်။
ဂျုံမှုန့်ရင်းမြစ်များ - ယူကေ - Shipton Mills Cake & Pastry Flour ကျွန်ုပ်အေးခဲနေသောကိတ်မုန့်များကိုရေခဲသေတ္တာထဲမှာအမြဲသိမ်းထားသည်။ နှင်းခဲသည်အတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးကိတ်မုန့်ကိုလတ်ဆတ်စေသော်လည်းအအေးကိတ်မုန့်ကိုဘယ်တော့မျှအစေခံမည်မဟုတ်ပါ။ ထောပတ်အအေးဖြစ်သောကြောင့်ကိတ်မုန့်အလွန်ခြောက်သွေ့သည်။ မင်းရဲ့ကိတ်မုန့်တွေကိုမင်းမ ၀ င်ခင်နာရီအနည်းငယ်အကြာမှာရေခဲသေတ္တာထဲကနေအမြဲထုတ်ပါ။ အရမ်းအေးမယ်ဆိုရင်ငါက ၁၀ စက္ကန့်လောက်မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်ဖိုကိုမိုက်ကရိုဝေ့ဖ်လောက်လုပ်ပြီးသွားပြီ။ ၇။ သင်ဒီဂူနစ်ကိုအစားထိုးဘီယာ၊ အခန်းအပူချိန်ရှိတဲ့ရေ၊ ကော်ဖီနဲ့အစားထိုးနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အရသာတူမှာမဟုတ်ဘူး။ ၈။ သင်သည်ဤစာရွက်တွင်ရှိသော Mayo ကိုအခန်းအပူချိန်ရှိသောဂရိဒိန်ချဉ်သို့မဟုတ်ချဉ်သောမုန့်ဖြင့်အစားထိုးနိုင်သည်။ သို့သော်အရသာတူမည်မဟုတ်ပါ။
chewy နှစ်ဆချောကလက် chip ကို cookies တွေကိုစာရွက်